IMacOS Big Sur 11.3 kunye ne-tvOS 14.5 ikhutshelwe bonke abasebenzisi | Ndisuka mac
Njengoko besilindele emva kwengcaciso ephambili esiyibonileyo ngoLwesibini odlulileyo, iApple ikhuphe zonke iinguqulelo zayo ezintsha zeenkqubo zokusebenza zazo zonke izixhobo zayo. Oku kubandakanya IMacOS enkulu ye-Sur 11.3 y TVOS 14.5.
Inyani yile yokuba akukho mmangaliso, kuba emva kovavanyo oluninzi lwe-betas ekhutshwe kubaphuhlisi kwiiveki ezidlulileyo, sele sikwazi ukubona iindaba abazibandakanyayo. Ngoku, ekugqibeleni, iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi.
U-Apple usandula ukukhupha iMacOS Big Sur 11.3, uhlaziyo kwinkqubo yokusebenza yeMac.Uhlaziyo lubandakanya inkxaso ephuculweyo entsha AirTags, Kwizicelo ze-iPhone kunye ne-iPad kwiApple Silicon, amanqaku amatsha eSafari kunye neendaba ezincinci.
1 Iphucula ukusetyenziswa kwe-iOS kunye nokusetyenziswa kwe-iPadOS kwiApple Silicon
2 Yintoni entsha yazo zonke iiMacs
3 I-TvOS 14.5 ikhutshelwe i-Apple TV
Iphucula ukusetyenziswa kwe-iOS kunye nokusetyenziswa kwe-iPadOS kwiApple Silicon
Ukuba unayo iMac Apple Silicon entsha, ene-processor ye-M1, kwaye ubusebenzisa ii -apps ze-iPhone kunye ne-iPad, olu luhlaziyo oluya kufuna ukulusebenzisa. Le Sur entsha inezicwangciso ezintsha Chukumisa ezinye iindlela ke unokuseta imiyalelo yekhibhodi endaweni yegalelo lokuchukumisa oqhele ukulenza kwi-iPhone okanye kwi-iPad. Ukwenza ezinye iindlela zokuchukumisa, cofa kwigama lesicelo kwimenyu yebar kwaye ukhethe ukhetho.
Nabani na odlala umdlalo we-iPhone kwi-Mac M1, uhlaziyo lunomlinganiso omtsha womqhubi obeka kwimephu imisebenzi yomlawuli womdlalo kwikhibhodi ye-Mac kunye nempuku.Isicelo se-iPad sinokuphinda senziwe ngefestile enye enkulu, kunye neMac M1s ngoku ube nenkxaso ye-hibernate.
Yintoni entsha yazo zonke iiMacs
Ukuhambelana nabalawuli bezinto ezintsha ezizayo ezivela kwaSony nakuMicrosoft ..
Uhlaziyo lwe-MacOS Big Sur 11.3 lunezinto ezininzi ezintsha kuzo zonke iiMacs, nokuba zikwi-Intel okanye i-M1 chips.
AirTags: Isicelo se "Khangela" ngoku sisebenza ngesixhobo esitsha se-tracker sika-Apple.
Ukuhambelana ngakumbi ne abalawuli beConsole-Ukuhambelana ne-PlayStation 5 kunye ne-Xbox Series X / S kwimidlalo ye-macOS.
IPod Home-Ungacwangcisa iiPodPods njengokhetho lwesiphumo esivelisayo kunye neePodPods ezimbini zivela njengeseti enye yezithethi zestereo kwiMac yakho.
umculo-Ukukhetha ukudlala ngokuzenzekelayo okuqhubeka nokudlala umculo emva kokuba uluhlu lokudlala lwenziwe, indlela emfutshane yethala leencwadi "Yenzelwe Wena" kunye no "Mamela ngoku" ngoku igubungela iminyhadala.
Izaziso-Icandelo elinikezelweyo "Lenzelwe wena" kwicandelo leApple News +, ithebhu entsha yokukhangela.
Ukulayishwa okwenziwe kakuhle Ibhetri: I-Apple ilungelelanise eli nqaku ukuze ibhetri yakho ye-macBook igcwaliswe ngokupheleleyo.
Izikhumbuzo-Izixhobo ezingcono zokuhlela, ukukwazi ukutsala kunye nokulahla isikhumbuzi kuluhlu olwahlukileyo, kunye nenkxaso yoluhlu lokuprinta.
safariulwenziwo lwekhasi lasekhaya, iVidiyo yeWebhu inkxaso.
Inkxaso: Ithebhu entsha yeNkxaso malunga nale Mac inikezela ngolwazi malunga nomgaqo-nkqubo wakho we-AppleCare +, kunye neqhosha lokufumana inkxaso ukuze uqalise iseshoni yenkxaso.
I-TvOS 14.5 ikhutshelwe i-Apple TV
I-tvOS 14.5 izisa inkxaso kulawulo lwamva nje Isikhululo sokudlala y Xbox isizukulwana esitsha. Izisa nenkxaso yento entsha yokulinganisa umbala kwiTV yakho.
Ngenkqubo entsha ye ulungelelwaniso lombala, I-Apple TV isebenza kunye ne-iPhone kunye nezivamvo zayo eziphambili ukuphucula umgangatho womfanekiso wethelevishini. I-Apple TV isebenzisa isivamvo sokukhanya kwi-iPhone ukuthelekisa ulungelelwaniso lombala kunye nemilinganiselo esemgangathweni yomzi mveliso esetyenziswa ngoochwephesha kwihlabathi liphela. Usebenzisa le datha, iApple TV iguqula ngokuzenzekelayo imveliso yayo yevidiyo ukuhambisa imibala echanekileyo ngakumbi kunye nokuphuculwa okungafaniyo, ngaphandle kokuba uhlengahlengise useto lwakho lweTV.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IMacOS Big Sur 11.3 kunye ne-tvOS 14.5 ikhutshelwe bonke abasebenzisi